कसरी एक कुकुर को कान सफा गर्न को लागी: तपाइँलाई चाहिने सबै | कुकुरहरुको संसार
एनकर्नी आर्कोया | 05/10/2021 15:17 | रोगहरू
कुकुर हुनु एक जिम्मेवारी हो किनकि यो न केवल राम्रो को आनन्द लिन को लागी हो, तर यो पनि आवश्यकताहरु को ख्याल राख्न को लागी तपाइँको पाल्तु जनावर छ। उहाँलाई नुहाउनु, पशु चिकित्सक वा जान्न को लागी कार्यहरु जस्तै कार्य कुकुरको कान कसरी सफा गर्ने तिनीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् किनकि उनीहरु स्वास्थ्य समस्याहरु लाई रोक्न सक्छन्।
यस कारण को लागी हामी तपाइँलाई कसरी एक कुकुरको कान सफा गर्न जान्न मद्दत गर्न चाहन्छौं। यहाँ तपाइँ यो साप्ताहिक हेरचाह गर्न को लागी एक पूरा गाइड पाउनुहुनेछ। के हामी काम गर्न तल जान्छौं?
1 किन तपाइँ आफ्नो कुकुर को कान जाँच गर्नुपर्छ
2 कुकुरको कान कसरी सफा गर्ने
2.1 आवश्यक तत्वहरू
2.2 कान सफाई आवृत्ति
2.3 कुकुर को कान सफा गर्न को लागी कदम
3 कुकुरहरुमा कान को समस्या कसरी रोक्न
4 लक्षणहरु कि तपाइँको कुकुर को ओटिटिस छ
किन तपाइँ आफ्नो कुकुर को कान जाँच गर्नुपर्छ
यदि तपाइँलाई थाहा छैन, कुकुरको कान यी जनावरहरुको सबैभन्दा संवेदनशील भागहरु मध्ये एक हो। र यसले उनीहरुलाई एक ठाउँ बनाउँछ जहाँ संक्रमणहरु तपाइँ मा प्रवेश गर्न सक्छन्। यदि तपाइँ उनीहरुको ख्याल राख्नुहुन्न भने, तपाइँ अन्ततः आवधिक ओटिटिस, सुन्ने समस्या, सुन्ने हानि, वा अझ नराम्रो बाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ, किनकि संक्रमण तपाइँको शरीर को अन्य भागहरुमा फैलिन सक्छ।
आवधिक निरीक्षण, साथ साथै सफाई, धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हुनु पर्छ एक महिना मा धेरै पटक जाँच गरीयो कि यो ठीक छ। ध्यान राख्नुहोस् कि कुकुरहरु आफ्नो कान आफैं सफा गर्न सक्दैनन्, तर उनीहरुलाई उनीहरुको मालिकको मद्दत चाहिन्छ।
तपाइँको कुकुर को कान को ख्याल राखेर तपाइँ मात्र यो सफा पाउनुहुन्न, तर तपाइँ स्वास्थ्य समस्याहरु बाट बच्न को लागी, वा पशु चिकित्सक को लागी जाँदै हुनुहुन्छ।
अर्को हामी तपाइँलाई तपाइँ एक कुकुर को कान कसरी सफा गर्ने बारे मा खाता मा लिनु पर्छ सबै कुरा को एक व्यावहारिक गाइड छोड्न चाहानुहुन्छ, तत्वहरु बाट तपाइँ यो गर्न को लागी तपाइँले लिनु पर्ने कदमहरु को लागी आवश्यक पर्दछ। निस्सन्देह, दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाइँ केहि अनौठो देख्नुहुन्छ, सबै भन्दा राम्रो कुरा तपाइँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको पशु चिकित्सक संग परामर्श गर्नु अघि समस्या अझ खराब हुन सक्छ।
MENFORSAN क्लीनर को लागी ...
हामी तपाइँ एक कुकुर को कान सफा गर्न को लागी सबै आवश्यक तत्वहरु बताएर शुरू गर्न जाँदैछौं। यी खोज्न गाह्रो छैन र सबैभन्दा सुरक्षित कुरा यो हो कि तपाइँ उनीहरुलाई तपाइँको आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ।
विशेष गरी, हामी सन्दर्भ गर्दै छौं:
कुकुरहरु को लागी कान क्लीनर। तपाइँ यो पालतू पसलहरु मा पाउन सक्नुहुन्छ तर पशु चिकित्सक मा जहाँ तपाइँ सामान्यतया जानुहुन्छ।
यदि तपाइँको कुकुर ठूलो छ, वा तपाइँ एक धेरै बेचैन कुकुर हो कि सजीलै सफा छैन, तब सबैभन्दा राम्रो चीज तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। दुई व्यक्तिहरु को बीच एक को लागी यो पकड को लागी काम जबकि अन्य ह्यान्डल र कान सफा गर्दछ।
अन्तमा, तपाइँ एक उपचार को रूप मा एक कुकुर को कान सफाई पछि दिन को लागी केहि व्यवहार गर्न चाहानुहुन्छ। यस तरीकाले तपाइँ समय संगै जान्नुहुनेछ कि, यदि तपाइँ आफैंलाई गर्न दिनुहुन्छ, तपाइँ पछि केहि पाउनुहुनेछ जुन तपाइँलाई धेरै मनपर्छ। निस्सन्देह, नबिर्सनुहोस् कि caresses वा उहाँ संग समय बिताउनु पनि ठूलो पुरस्कार हुन सक्छ।
कान सफाई आवृत्ति
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डाटा को एक तपाइँलाई थाहा छ जब एक कुकुर को कान सफाई आफ्नो आवृत्ति हो। त्यो हो, कति पटक तपाइँ उनीहरुलाई सफा गर्न को लागी कि उनीहरु स्वस्थ छन्। र यस मामला मा, जवाफ को रूप मा सजीलो छैन जस्तो कि तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ किनकि यो धेरै हद सम्म कुकुर को नस्ल तपाइँ मा निर्भर गर्दछ।
तपाइँ जान्नुहुन्छ, त्यहाँ कुकुरहरु को धेरै नस्लहरु छन्, र प्रत्येक एक फरक विशेषताहरु छन्। यस अवस्थामा, तपाइँ के दिमागमा राख्नु पर्छ कि, लामो फ्लपी कान संग कुकुरहरु (ती कि कान नहर कभर) कानमा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ.
अन्य शब्दहरुमा, लामो, फ्लपी कान संग कुकुरहरु लाई छोटो र उल्टो कान संग भन्दा नियमित सफाई को आवश्यकता छ।
र कति पटक सफा गर्ने? त्यसपछि:
यदि उनीहरु छोटो र नुकीला कान संग कुकुरहरु छन्: 1-2 पटक एक महिना।
यदि उनीहरु लामो, drooping कान संग कुकुर हुन्: 1-2 पटक एक हप्ता।
कुकुर को जीवन शैली मा निर्भर गर्दछ, यो आवृत्ति फरक हुन सक्छ, तर नियमित सफाई कान नहर मा प्रमुख समस्याहरु बाट बच्न को लागी महत्वपूर्ण छ, खास गरी यदि त्यहाँ सानो हावा प्रवाह वा नमी वा मलबे जम्मा छ।
कुकुर को कान सफा गर्न को लागी कदम
के तपाइँ कहिल्यै तपाइँको कुकुर को कान सफा गर्नुभयो? आदर्श त्यो हो यो एक कुकुर हो किनभने यो गर्नुहोस्, ताकि तपाइँ आफैंलाई गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। तपाइँले उसलाई एक ठाउँमा लैजान सुरु गर्नु पर्छ जहाँ उहाँ सहज महसुस गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पाउनुहुन्छ कि उहाँ नर्भस बन्नुहुन्छ, यो आवश्यक हुन सक्छ कि कोहि तपाइँलाई उसलाई समात्न को लागी मद्दत गर्न को लागी जब तपाइँ जाँच र कान सफा गर्न सक्नुहुन्छ।
कान समात्नुहोस् र यसलाई तपाइँको औंला र तर्जनीको बीचमा समात्नुहोस्। यस तरीकाले तपाइँ कान भित्र एक राम्रो नजर लिन सक्नुहुन्छ र यदि स्राव, नराम्रो गन्ध वा रातोपन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ मोम को एक धेरै सहित, यी चीजहरु को कुनै पनी नोटिस, यो सबै भन्दा राम्रो छ कि पशु चिकित्सक को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी त्यहाँ कुनै अधिक गम्भीर समस्या छैन।
अर्को चरण तपाइँ लिनु पर्छ बिस्तारै एक नम कपास बल संग कान सफा गर्न को लागी। तपाइँ यसलाई राम्ररी सफा गर्न सीरम को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, कपास धेरै नराख्ने कोसिस गर्नुहोस् किनकि यो उनीहरुको लागी अप्रिय हुनेछ। अर्को, कुकुर क्लीनर को टिप सम्मिलित गर्नुहोस् र तरल को केहि जोड्नुहोस्। राम्रो तरिकाले मालिश गर्नुहोस् कि यो कान नहर को माध्यम बाट जान्छ र कान छोड्नुहोस्।
सामान्य कुरा यो हो कि कुकुर आफैं हल्लाउँछ, तर यो गरे पछि यो शुरु मा जस्तै फेरि कान समात्न र अर्को सिकेको र सफा कपास संग अतिरिक्त हटाउन को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
यो अर्को कान मा पनि गरिनु पर्छ।
कुकुरहरुमा कान को समस्या कसरी रोक्न
सफाई को अतिरिक्त, यो महत्वपूर्ण छ कि केहि परिस्थितिहरु लाई रोक्न को लागी कान को संक्रमण को उपस्थिति लाई बढावा दिन सक्छ। उदाहरण को लागी, आर्द्रता, राम्रो संग स्नान गर्दा वा यदि यो गीला हुन्छ (एक वर्षा बाट) किनभने यो ब्याक्टेरिया कान मा बढ्न सक्छ।
अर्को बिन्दुलाई ध्यानमा राख्नु हो अनौठो शरीर, जो जलन पैदा हुनेछ। हामी धूल, बिरुवाहरु छडी र तपाइँको कान रगड्ने बारे मा कुरा गरीरहेछौं (वा यसमा अडिन्छ), आदि।
कपाल, कुकुर को केहि नस्लहरु यो लामो छ र यो सामान्यतया काटिएको छ, तर वास्तविकता मा यो सबैभन्दा राम्रो छैन किनकि यो कपाल विदेशी निकायहरु, नमी को बिरुद्ध एक बाधा को रूप मा कार्य गर्दछ।
लक्षणहरु कि तपाइँको कुकुर को ओटिटिस छ
र तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यदि तपाइँको कुकुर लाई सुन्ने समस्या छ? को ओटिटिस बारम्बार हुन्छ, विशेष गरी गर्मी मा, जो जब हामी सबैभन्दा गीला पाउँछौं। तेसैले, जान्नुहोस् कि कुन लक्षणहरु लाई तपाइँ सतर्कता मा राख्न सक्नुहुन्छ तपाइँलाई नराम्रो हुनु भन्दा पहिले कार्य गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
ती सूचनाहरु मध्ये हामी छ:
तपाइँको कुकुरलाई सामान्य भन्दा धेरै हल्लाउन दिनुहोस्।
यसलाई स्क्र्याच वा रब गर्न दिनुहोस्।
यदि तपाइँको कुकुर को टाउको एक छेउमा छ।
यसले कानमा सम्पर्क हुनबाट बचाउँछ।
स्राव र खराब गन्ध।
यदि तपाइँ यी लक्षणहरु को धेरै देख्नुहुन्छ र उसको कान सफा गर्न को बावजूद, सबै भन्दा राम्रो कुरा तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ उसलाई पशु चिकित्सकको लागी उसलाई जाँच गराउनु छ।
के तपाइँ कसरी कुकुरको कान सफा गर्ने बारे मा प्रश्न छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » रोगहरू » कुकुरको कान कसरी सफा गर्ने